Nsonaazụ ego Apple na nkeji nke abụọ nke 2016 | Esi m mac
Emepụtara nsonaazụ nke Apple nkeji iri na ise
Apple taa kwuputara nsonaazụ ego maka nkeji afọ nke abụọ (nkeji kalenda nke mbụ) nke 2016. Nsonaazụ ndị a nyere data ntinye ego nke 50,6 otu ijeri dollar site na uru ijeri nkeji iri na ise na ijeri 10.5, ma ọ bụ ihe bụ otu, na dọla 1.90 kwa nke etinyere etinyere. Ọ bụrụ na anyị tinye ya n'ọnọdụ, Apple enwewo oke nwayọ nwayọ, ebe ọ bụ na n'otu ụzọ n'ụzọ anọ nke 2015, ọ nwetara ego nke ijeri 58 ijeri site na nrite uru nke 13.6 ijeri, ma ọ bụ dollar 2,33 kwa akụkụ diluted.
Nke a abụrụla mbụ “downturn” maka Apple kemgbe 2003, agbanyeghị ọ pụtaghị na ọ dị njọ kama na oke uru oke guzo na 39,4% jiri ya tụnyere afọ 40,8%.
Na mgbakwunye na mmụba na ịkwụ ụgwọ ịkwụ ụgwọ, Apple kwuru na ọ ga-ewelite oke nkwụghachi azụ ịlaghachi $ ijeri $ 50 na ụlọ ọrụ ahụ na-ekwu na ọ na-atụ anya emefu ihe karịrị 250 nde ego n'okpuru ngwụcha ngwụcha ọnwa March nke 2018.
Banyere ahịa, ụlọ ọrụ ahụ nwetara etinye n'ime mgbasa 51,1 nde iPhoness n'oge nkeji iri na ise, gbadata site na 61,2 nde n'afọ gara aga, ebe ahịa Mac bụ 4,03 nde nkeji, ma e jiri ya tụnyere nkeji 4,56 na nkeji iri na ise nke afọ gara aga. IPad ahịa a na-ahụkwa mbelata, na-ada site na nde 12,6 na nkeji nke abụọ nke 2015 ruo nde 10,2 taa.
Dị ka Tim Cook si kwuo, Apple CEO:
Ndi otu anyi na eme ihe nke oma n’agbanyeghi na enwetarala ihe omuma nke ego. Obi dị anyị ezigbo ụtọ na mmụba siri ike na ntinye ọrụ yana ọkachasị maka ike dị egwu nke usoro okike Apple na ntọala ọjọọ anyị nke otu ijeri ngwaọrụ arụ ọrụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Apple » Emepụtara nsonaazụ nke Apple nkeji iri na ise
Echere m na ọ bụ mgbịrịgba ịdọ aka ná ntị n'ihi nkwụsị ya na mkpa ndị ahịa. The iPhone SE ga-abụ edemede ma ọ bụrụ na ha agbaso otu ụdị ahụ na ngwaahịa ha niile (atụmatụ dị mma, nkọwa dị mma). Ọ chọrọ mmelite nke Macbook Ikuku, (ọ bụrụ na Macbook agaghị enwe ọdụ ụgbọ mmiri), na n'ozuzu usoro kọmputa niile na-enweghị emelite Mac mini, iMac, Macbook pro. Ọ bụrụ na otu ihe ahụ na - eme ha dịka Nokia ma ọ bụ Blackberry, ọ bụghị maka enweghị ngwaahịa ịdọpụta.
Utu Apple Watch na-agba ụgwọ n'ọdụ ụgbọ mmiri